Masteron Propionate powder for: 6 inyaniso kufuneka uyazi !!! | AASraw
/Blog/Masteron Propionate/Thenga i-Masteron Propionate powder for bodybuilding: i-6 inyaniso kufuneka uyazi !!!
ezaposwa ngomhla 03 / 04 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Masteron Propionate. Ibe 1 Comment.
Masteron Propionate yi andbolic androgenic steroid enegama lezesayensi ye-Drostanolone Propionate evela kwi-dihydrotestosterone (DHT). Ukwahlukana kukuba i-Masteron yatshintshiswe kancinci ngokudibanisa iqela le-methyl elikhusela i-hormone ukusuka ekuhleni kwe-enzyme i-3-hydroxysteroid dehydrogenase efunyenwe kwisisipha somzimba. Inzuzo eyongeziweyo yeqela le-methyl yiyo eyenza i-anabolism ye-hormone ekhuthaza ukukhula kwimisipha. I-ester propionate iyaqhotyoshelweyo elawula ixesha lokukhupha kwaye idala ifomu eyaziwa kakhulu ye-Masteron. Nangona kunjalo, I-Drostanolone Inanthate usenokufumaneka kwiimarike eziphantsi komhlaba.
Igama elithi Masteron livela kwi-1970 apho inkampani ebizwa ngokuthi iSytex yenze i-steroid phantsi kwelo gama kwaye yiletha emakethe. Nangona, baphinde bakhulise iqela phantsi kwamanye amagama bathanda i-Masteril, iDrolban, ne-Metormon kodwa u-Masteron wanamathela kwixesha elide. Baye bahlakulela i-Oxymetholone, eyaziwa ngokuba yi-Anadrol, ngexesha elifanayo kwi-1959. Ekuqaleni isilwanyana senziwe ukuba sisetyenziswe nezigulane zomhlaza webele. Yasebenza ukuzinza isigulane kwaye inikezele induduzo nangona bekunokungasebenzi. Ngokukhawuleza, abalondolozi bomzimba baqala ukuwusebenzisa ngenxa yeziphumo xa kunqanyulwa apho ihlala khona, kwaye kuvela iziphumo ezinamandla.
Thenga i-Masteron Propionate powder
I-Masteron Propionate Powder, luhlobo oluthile lwe-crystal powder. Njengoko i-Masteron Propionate, i-Masteron Propionate ipowder eninzi yinto yokuthengisa ezitshisa phakathi kwe-steroids, kungekhona nje ngenxa yeendleko ze-Masteron Propionate, kodwa ukuhlambuluka I-Masteron Propionate eluhlaza, ewe, ukuba ndithenga i-Masteron Propionate ipowder eninzi, okanye i-labor use, ndikhetha ukuthenga i-Masteron Propionate eluhlaza kwi-intanethi, khetha umthengisi we-Masteron Propionate othembekileyo kwaye ugcine ulwalamano oluzinzileyo.Ienkcukacha ze-Masteron Propionate inkcazo ye powder in AAS njenge:
Igama: Drostanolone / Masteron Propionate
I-Formula ye-Molecular: C23H36O3
I-Melt Point: 114-120 ° C
I-Masteron propionate powder ithandwa phakathi kwabakhi bomzimba
I-Masteron / i-Drostanolone propionate idla ngo-injections, kwaye isetyenziswe ngokubanzi ngabadlali kwizakhiwo zomzimba ukuze kugcinwe ubunzima bemisipha kunye namandla ngexesha "lokusika".
I-Drostanolone idla ngokusetyenziswa ngabagijimi kunye nabagijimi abazimisele ukuhlala kwisigaba esifanayo (ukukhusela ukuzuza amaninzi).
I-Masteron ithandwa kakhulu ekwakheni umzimba njengoko ingabangeli ukugcinwa kwamanzi kwaye inemiphumo emihle ye-diuretic, leyo leyo leyo, inceda ekufumaneni imisipha.
I-Drostanolone inokuba lunomdla kulaba baphumeleli abanomdla wokwandisa ubunzima bexinzelelo. Imveliso isetyenziswa ngokukhawuleza ngaphambi kokuba ukhuphiswano.
I-Drostanolone yenza kube lula ukufezekisa iifom zezona zihamba kakuhle. Iipropati zayo eziqhumayo zifaka isandla kwenkqubo.
Amava abonise ukuba umjikelo we-Masteron unganciphisa ubunzima be-fat by 5-7%.
I-Masteron ikhuthaza ukusebenza komzimba xa igcina ubunzima kunye nokunciphisa ubuninzi beoli. Esi siphumo se-drostanolone sitsala ngokugqithiseleyo abanamandla.
Imveliso ingasetyenziselwa kunye kunye nokutya ukuze ulahlekelwe isisindo ngelixa ugcina ubunzima bemisipha kunye nokuphelisa i-catabolism
Iinzuzo ze-Masteron Propionate powder
Izibonelelo eziphambili ze-Masteron-Propionate zilula; umzimba onobuchopho obunzima. Kubalulekile ukuba uqaphele le nqanaba yobunzima-engayi kunika yona ayiyi kuba yinto ebalulekileyo ukuba umzimba unomqolo obunqambileyo weoli; Ewe, le steroid iya kukhuthaza ukulahlekelwa kwexabiso elincinci kodwa ayiyi kuyenza i-fat body ifakwe kwisithambo. I-Masteron inenzuzo xa sisele sisesimweni esinzima, xa i-fat fat body isele iphantsi; kungekuphela kuphela kuya kukunceda ukungafihli kuwe kwezinye izinto ezikude kunzima ukulahlekelwa ngamanqatha kodwa wenze ukubonakala komzimba kubonakale kunzima ngaphandle. Ukucacisa, xa uthetha ngamanqatha omzimba aphantsi kunye nokusetyenziswa kwesi steroid sithetha nge-8% okanye ngezantsi kunye ne-6% okanye ngaphantsi kuba ngaphezulu kakhulu.
Nangona ubunzima kunye nefuthe lokulahlekelwa kweoli kunokukhuthaza ukuba zimbonakaliso ezimbini ezilungileyo kumbono wazo, kungeyona inzuzo enkulu kakhulu. Ngokwemvelo yayo i-Masteron-Propionate inqanda inxaxheba kwinkqubo ye-aromatase kwinqanaba. Hayi, i-Masteron ayifuni i-aromatize kwindawo yokuqala kodwa ibonakala ibuthathaka inxalenye ye-aromatase yezinye i-anabolic steroids ezininzi, ezifana ne-testosterone. Njengoko sixoxile ngokuthi i-Masteron iyanzima yodwa kodwa yinto echasene ne-aromatase ekhuphayo le mpawu, kuba ngumphumo we-aromatase obangela i-estrogen buildup kwaye yinto yokwakha i-estrogen enokuthi ibenze i-physique ithambile.
Indlela yokwenza i-Masteron Propionate injection kunye ne-Masteron Propionate powder?
I-Masteron Propionate powder recipe
Umthengisi oqhelekileyo we-Masteron Propionate ngokuqhelekileyo uthenga i-Masteron Propionate powder online, kwaye uyayisebenzisa, yenza i-brand .Umnye umenzi we-Masteron Propionate omtsha mhlawumbi akaqhelani nendlela yokwenza ngayo.Akunakukhathazeka, xa uthenga i-Masteron Propionate powder evela kwi-AAS, iresiphi kunikezelwa ukuba wenze iimveliso zakho.Siye senza uvavanyo oluninzi, kwaye luya kuba lusebenza kakuhle.Nje mazise malunga nalo.
37ml GSO yeoli
14.5ml GSO yeoli
I-25 gram masteron inhlawulo yecala (20ml)
175 ml GSO ioli
I-recipe apha ngasentla yenzelwe iinkcukacha, ukuba unjani uhlobo lomkhiqizo owufunayo, unokuzilungelelanisa ngokwakho. Kwaye into enye kufuneka uyifumane ukuba uyenze ukuba usebenzise izinto eziphathekayo kukuhlambulukileyo, umgubo, ioli, i-BB, i-BA, zonke izinto ofuna ukuziqwalasela.
Unokukhetha njani umthengisi we-Masteron Propionate othembekileyo?
Ngethuba leperoid yokufumana umthengisi othembekileyo we-Masteron propionate powder, wazama iindlela ezininzi.
Okokuqala, zama ukukhangela umthengisi ophezulu we-20 Masteron propionate, kwaye uzama ukwazi ezinye iinkcukacha, kodwa ngokubhekiselele ekubhekiseleleni.
I-AASraw ye-Biochemical Technology Co. yahlelwa kwakhona yi-Shanghai yase-Shanghai yaseBlookystem Engineering Laboratory e-2008, eyakhiwa yi-5 yaseTshayina Ph. Oogqirha, abaphakanyisiwe kwi-Khemishini yobunjineli kwiYunivesithi yaseTulsa, e-Oklahoma, eU.SA. Imveliso ephezulu: i-anabolic steroids i-powder eluhlaza , ukwakha umzimba, ukuqina, ukulahleka kwamafutha, i-hormone zesondo, i-SARMS, iziyobisi ze-PCT, i-HGH, homebrew, ugl.Ngokwezinto endaziyo, Xa uthatha isigqibo sokuthenga i-Masteron propionate powder evela kwi-AAS, izinto omele uzenze:
tags: bathenge i-Masteron Propionate powder, Masteron Propionate powder, i-Masteron Propionate powder
Yintoni i-nandrolone powder esetyenziselwa i-nandrolone inzuzo?	Yintoni i-Super Cardarine? / IiNzuzo ze-8 zeCarardarine